Ramadaan…Hayin qooqan oon degayn! | isbeddel
← Qaraxyada Norway: Farriinta midigta durugsan
La soo gaara maatidu waxay geliso uurkeeda →
Ramadaan…Hayin qooqan oon degayn!
Qallinkii: Khaalid Xasan VS. Turjumaaddii: Xasan Warfaa
Alla weynaa Ramadaantu, oo badanaa barakadeeda iyo bilankeedu.
Waxa ka dhacaya Suuriya iyo Liibiya waa nashqad dagaal oo ka yaabisay bari iyo galbeed ba. Waxa lagu jiraa mid ka mid ah dagaallada ugu daran ee iska caabbinta taas oo ka socota magaalooyinka Suuriya ee kacsan; ee ka soo horjeeda cabbudhinta. Waa dagaal ku siqid ah oo lagu siqiirinayo awoodda shaydaan ee Daraabulus iyo Casiisiya…tanna waa bil kacsan oon weligeed fadhiisan; ilaa waayo hore iyo beri samaad.
Wax kale ma ahee waa Ramadaantii takbiirta iyo shanqadha madaafiicdu agaggax gelin jireen gumeysiga iyo dulmiga, taraawiixduna agaggaxaa ku sii maashayn jirtay kurbasho iyo kabashlayn. Ramadaanta ayuu sharkuna labalaabaa denbiyadiisa iyo agaggax-gelintiisa, laakiin bishani hadday timi waxa bilaabmay jabkiisa, dumidda awooddiisa…sidaas darteed buu u anfariirayaa, magaalooyinka iyo tuulooyinka cagta u marinayaa, dadka u laynayaa si uu isaga fogeeyo qarowga Ramadaan ku dhalinayso awooddiisa kharriban…laakiin Ramadaan waa mucjiso luqunta ka jebisa kibirlayaasha, iimaanlaaweyaasha iyo waallidoodaba.
Dad badani waxay filayeen in kacdoonka Liibiya lagu kala jabi doono, ama ugu yaraan uu noqon doono dagaal dheer oo lagu dhiig baxo; qaar kalena waxay afuufeen jidhka Asad ee taagta daran ee ay xubin wal oo ku taal ay ka muuqato dhaawacyadii iska caabbinta iyo adkaysigu; dhaawacyadii ay geysteen geesiyaasha Shaam. Laakiin wiilashii Cumar al-Mukhtaar waxay ballan taariikhi ah la lahaayeen bil weyn oo aan daalka iyo degitaanka aqoon, bil aan isdhiibin, foororsan, nifaaqa iyo isu jajabinta cid kalena aqoon. Markaa may dhibin geesiyaashaasi cid kasta oo colaadisay ama u tashatay; ha ahaato maamul, qoraayo iyo aqoonyahan isu sheegyo ba. Xamaah na waa Xamaah; waa meel aan xorriyadda lagu doorsan karin wax kale oo kasta, waana go’aan baabbi’inaya xukun reereed dhiig badan daadiyey taas oo ay wakiil uga ahaayeen askar iyo taangiyo ku jabay faranta Juulaan—waahore iyo imikadan ba. Sidaas ayay Ramadaan na sirteeda, awooddeeda iyo neecawdeeda ugu afuufaysaa reer Shaamka xaq-u-dirirka ah.
Ramadaanta weyni uma dabacdo daalin iyo kelitalis; iyada iyo geesiyaasheedu waxay u socdaan siday dhulka ula simi lahaayeen gidaarka cabsida, aamusnaanta iyo nifaaqa; waa garab xoog badan; waa il ay ka soo burqato dhiirranaan iyo hore-u-socodnimo lagaga xoroobayo addoonnimada.
Soo dhowow si aad dabayl ugu kiciso kelitaliyeyaasha uguna gargaarto geesiyaasha xorta ah.
Khaalid Xasan: http://alasr.ws/index.cfm?method=home.con&contentid=11964
Posted by Warfaa on Agoosto 2, 2011 in Uncategorized